EXCLUSIVE: Drew Struzan's Jaw-Kudonhedza MondoCon 2017 Inoratidza - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau EXCLUSIVE: Drew Struzan's Jaw-Kudonhedza MondoCon 2017 Inoratidza
EXCLUSIVE: Drew Struzan's Jaw-Kudonhedza MondoCon 2017 Inoratidza
by Trey Hilburn III October 30, 2017 1,205 maonero
MondoCon yave pedyo nesu. Mhemberero yemutori wemapepuru iri kuenda pasi Mbudzi 4 na5 muAustin, Texas kuAustin American- Statesman uye isu hatigone kumirira. Kwemavhiki mashoma apfuura, isu tine gander pane zvimwe zvakanaka izvo zvinoshamisa mutsara wevaartist urikuuya navo. Chimwe nechimwe chakaburitswa chave chakashamisa sekupedzisira. Zvikwama zvedu zvave kutobvunda nekutya kuwanda kwezvinhu izvo zvatave kutoda kuwedzera kune edu ekuunganidza.
Gore rino, inozivikanwa Drew Struzan achange aripo pakati peatove akanakisa runyorwa rwevanyori uye isu hatigone kuzvibata isu, imi varume. Struzan ndiye anotungamira kune ese marudzi emifananidzo inopembererwa pamusoro pemakore, kubva kuStar Wars kuenda kuIndiana Jones kusvika kuBlade Runner (kutumidza vashoma) uyu murume ingano yekufamba. Kuuya kwake kuMondoCon kwegore rino kwakananga kumusoro.
Hatina kukwanisa kufara zvakanyanya kupihwa mukana wekuti tigovane chete maviri ezvinyorwa izvo Struzan achange achiuya nazvo. Ehezve, ese ari maviri ari kufadza uye imi vakomana muchazoda kuve vaviri vaviri, isu tinodaro chaizvo. Kunyanya, chikara chaFrankenstein nemuroora wake havana kumbotaridzika zvirinani.
MondoCon kupemberera kwezvose zvinoda Mondo, zvinosanganisira mabhaisikopo, hunyanzvi, maekisheni, mimhanzi, matoyi uye chikafu. Iyi vhiki yevhiki yakarongedzwa nevateveri mupfungwa, iine anoshamisa maartist uye vagadziri vanobva kumativi nyika, mapaneru, kuongororwa, marori ezvokudya, mhenyu mhenyu uye zviitiko zvekudyidzana.
“MondoCon mhemberero yezvinhu zvese zvinoda Mondo, zvinosanganisira mabhaisikopo, hunyanzvi, makomiki, mimhanzi, matoyi, uye chikafu, uye tinofara kugovana rudo rwedu neguta reAustin nekubata gungano reguta chaipo kuAustin American-Statesman . ” Vakadaro Mondo's Gallery uye Zviitiko maneja, David Rancatore. "Iyi nzvimbo yaigara dzimba dzekutsikirira dzepepanhau uye inzvimbo huru kune vese vanoshamisa maartist, varatidziri, varipo, uye mapaneru svondo rino. "Tinofara kugamuchira kuratidzwa kwedu kwemanheru kuAlamo Drafthouse kuSouth Lamar, imba yeMondo kwemakore mazhinji, uye kuti vateveri vedu vafarire chiitiko chinotyisa chemuDrafthouse."
Kuti uwane rumwe ruzivo nezvezvinhu zvese Mondo neMondoCon, tungamira kumusoro kumamondotees.com. Ndoona ipapo, vanhu!
Frankenstein naDrew Struzan
Yakadhindwa neDL Screenprinting
Mwenga waFrankenstein naDrew Struzan